Shiinaha Koritaanka Teendhada Beerta Gudaha ee Tayada Sare 120*120*200 warshad CM iyo alaab-qeybiyeyaal | Virex
Kori Teendhada Beerta Gudaha ee Tayada Tayada Sare 120*120*200 CM
Qalabka teendhada koraan ee Virex waa 600 D oxford maro iyo mylar sare oo milicsi leh .Waxay ku habboon tahay beeritaanka gudaha, cabbirka yar ma qabsanayo meesha si sahlan loo rakibo oo loo guuro.
VIREX Grow Tent waxaa laga sameeyay 600D Oxford waxaana lagu safeeyay qalin PET mylar oo leh heer ka tarjumaysa in ka badan 95%. Qalabka teendhada culus, xoojinta birta dahaarka cad, wadajirka waajibka culus ee madow ee ABS, badbaado iyo xasilloon.
Naqshad albaab u qaabaysan, laba-jid oo labajibbaaran siiba caag ah oo waara. Meelo badan oo mataano ah ayaa loo isticmaali karaa in lagu qaado filtarrada iyo taageereyaasha. Shaandhooyin cadcad waxa loogu talagalay inay ka caawiyaan wareegga hawada oo ay makhluuqa kale ka ilaaliyaan teendhada koraysa.
VIREX beeritaanka Teendhooyinka waxa ka mid ah: xadhiga wax qaadista, saxaarad sagxeedka biyuhu aanay ka bixi karin iyo tilmaamaha rakibaadda.
Teendhada beeritaanka VIREX waxa lagu habayn karaa cabbir ahaan, midab, daaqada daawashada, summada, sanduuqa qalabka iyo wax ka badan. Bixi adeegga iibka ka dib ee teendhooyinka beeritaanka VIREX. Marka aad la kulanto wax dhibaato ah, fadlan la xidhiidh kooxdayada adeegga iibka ka dib taageeradayada.
1.Qalab: 600D aflaan aluminium ah oo hadhuudh ah oo ka samaysan Oxford (600D dhumucdiisuna tahay 0.35mm)
2.Tube Iron: Bir dahaarka cad TUBE D16 * 0.6mm (midabka waa la beddeli karaa)
3.Qalabyada: Qalabka birta ee ABS ee culus
4.Cidhifka duubista: Cidhifka duubista cagaaran (caadola yeeley midab)
5.Cabbirka daloolka hawo-qaadista: 4/6/8/10 inji
6.Sifee cabbirka daaqadda: 45*13.5cm shaashadda daaqadda shaandhada cad
7.Saxarada biyaha: balastar laba-geesood ah oo madow oo go'an
8.xadhig hawo-qaadista godka hawo: xadhig madow PP
9.Zipper: Cabbirka madow ee 10 jibbaar
5. Aad ugu fiican manjooyin ubaxeed.
6. Maqasyada khafiifka ah ee khafiifka ah.
Magaca Alaabta VIREX 120*120*200 Teendho Korri
1.Waxaan bixinaa OEM/ODM.
4.Dhammaan alaabtayada ayaa si taxadar leh u tijaabin doonta waaxdayada QC si loo hubiyo tayada heerka sare.
Q1:Ma beddeli kartaa astaanta, baakaynta iyo naqshadaynta alaabtaada?
Q2:Sida loo hubiyo tayada?
Q3:Waa maxay shuruudaha lacag bixinta?
Hore: Spectrum Full LED Iftiin Wax ku oolnimada Sare ee Xakamaynta Garaad Naqshad Koritaanka Iftiinka LED
Xiga: Naqshad Cusub Oo Koritaanka Shandad La Habeeyay Isticmaal Waara Khudaar la beeray
Kori Teendhada 100*100*200 CM Hydroponics Indoor Gar...